Amin’ny Alàlan’ny Fanetsehana Ireo Sampy Ejiptiàna, Tetezin’ilay Sarimihetsika “Seder-Masoshism” Novokarin’i Nina Paley ny Momba ny Fanjakan’ny Zokiolona ao Anatin’ny Bokin’ny Eksodosy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2018 14:32 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, 繁體中文, 日本語, русский, नेपाली, English
Nitafa tamin'i Nina Paley, ilay Amerikàna mpamokatra sarimihetsika sady mpikatroka ho an'ny kolontsaina malalaka, momba ny sarimihetsikany Seder-Masoshism (Sedera-Fampijaliantena – Sakafo raisna ny alina voalohany mialoha ny Paska) ny Global Voices. Mifototra tanteraka amin'ny Bokin'ny Eksodosy avy amin'ny Torah/Baiboly izy io ary maneho ny fanjakan'ny zokiolona afenina ao anatin'ny soratra masina.
Fehezana fahazoandalana malalaka ny lisansa Creative Commons (CC)—ny lisansa CC0 izay malalaka indrindra amin'ny lisansa rehetra dia mamela an'ireo mpampiasa mba hampiasa, hizara, manao fanitarana, ary hatramin'ny fampiasàna ny fototra niaingàna/fanitarana ho amin'ny tanjona ara-barotra, tsy misy tambiny ara-bola. Eo anilany, fahazoandalana faran'izay tery amin'ny fahazoandalana CC rehetra ny Creative Commons Non-Derivative Non-Commercial CC-BY-ND-NC ary manakainy ny “Zo Rehetra Voatokana”
Talen'ilay sarimihetsika feno Mihira Blues i Sita izay navoakany ho an'ny sehatry ny daholobe tamin'ny 2013 i Paley. Tamin'ny fampiasana ireo hira jazz-n'ny taona 1920 an'i Annette Hanshaw, tantarain'ilay sarimihetsika ny momba ilay tononkalo Indiana manainga fanahy Ramayana. Nitondra laza manerantany ho an'i Paley ilay izy noho ny fandikàny feminista an'ilay tononkalo manainga fanahy sy ny ady naharitra ela nataony ho fitakiana ny zon'ny mpamorona mifamatotra amin'ny hiran'i Annette Hanshaw nampiasaina tao amin'ilay sarimihetsika. Raha kely indrindra, tsy maintsy nandoa US$50,000 tamin'ny findramana vola i Paley, taorian'ny adivarotra. Mazava ho azy fa namerina nisokajy ny fahazoandalàn'ny horonantsary avy amin'ny Creative Commons Attribution-Share-alike 3.0 Unported (CC-BY-SA 3.0) ho any amin'ny Creative Commons CC0 (mitovy amin”ny sehatra ho an'ny daholobe) izy avy eo
Tao anatin'ny antsafa niarahany tamin'ny fandefasampeo Jiosy eo amin'ny aterineto Judaism Unbound, niteny i Paley fa ny Seder-Masoshism no andikàny ny Eksodosy izay nianarany voalohany nandritra ny Sederan'ny Paska. Fombafomba Jiosy ny Paska izay misy idiran'ny ny famerenana mitantara ny famotsorana ny Israelita tamin'ny fanandevozana tao Ejipta taloha. Nampiany tao atn'ilay antsafa fa “mahita ny tenany ho “nateraka indray tsy ho mpino izy”” ary hanazaviny ny fomba nahatonga ny fianarany vao haingana ny Bokin'ny Eksodosy hametraka azy tsy hahazo aina.
Hira sy ampahany betsaka avy ao amin'ilay sarimihetsika no efa navoakan‘i Nina tety amin'ny aterineto miaraka amin'ilay laharankira “Mila Mino Ianao” izay namadika ireo sampy vato andriamanibavy ejiptiana ho sary netsehana tamin'ny rindrambaiko flash. Asongadin'izy io i Moîzy sy ireo andriamanibavy mpihira taloha izay teo an-dàlam-paharesina nanoloana ny fitondran'ny zokiolona.
Nina Paley (NP): Fanindroany amin'ity, mamokatra, mitarika, manoratra, manetsika, manao ny zavadrehetra….Manantena ny mpamorona feo ho an'i “Sita Sings the Blues“, Greg Sextro, raha mba afaka manao famolavolana feo mismisy kokoa ho an'ny Seder-Masoshism. “Hita” daholo ny hira ary [hatreto] ampiasaina tsy misy fahazoandalàna ny mozika. Fampiasaina tsy miangatra ny ankamaroany na ny fampiasàko rehetra, saingy tsy afaka faritàna ratsy tsy eny amin'ny fitsarana irery ihany no farany.
Seder-Masochism is about the Book of Exodus from the Torah/Bible, and indirectly the Quran (Moses is a prophet of Islam). My interpretation of Exodus is that it's the establishment of complete patriarchy, the elimination of any remaining goddess-worship from older times…..Momba ny Bokin'ny Eksodosy avy ao amin'ny Torah/Baiboly, ary an-kolaka ihany koa ny Korany (mpaminan'ny Silamo i Mosesy) ny Seder-Masoshism. Ny fipetrahan'ny patriarika feno, ny fanalàna an'izay sisan'ny fiankohofana aminà andriamanibavy avy amin'ireo fotoana fahagola no fijeriko ny Fifindramonina.
Eto ny sasany amin'ireo rakitsary mbola an-dàlam-panatontosàna.
NP: Nolazan'ireo mpitia ny fototra, izay miantso an'ireo mpiara miasa amiko ho “Hindoa mankahala ny tenany”, ny “Mihira Blozy i Sita”. Amin'ny maha Jiosy ahy, efa henoko izany kabary tsara lahatra izany – *namorona* izay “fankahalana ny tenany ” tsy misy dikany izay ny Jiosy. Satria tsy Zionista aho, dia nantsoina hoe “Jiosy mankahala ny tenany” koa. Ary niantso ahy ho “Kristianina vehivavy fotsy izay mankahala Hindoa” ny Hindutvadis, ary nandefa imailaka fankahalana miteny hoe ” ho tianao ve raha misy olona manao sarimihetsika momba ny fivavahaNAO?” Mazava ho azy fa tiako rehefa misy olona manao sarimihetsika tsara momba ny Abrahamisma – Ny Fiainan'i Monty Python an'i Brian no tsara tonga ao an-tsaiko. (Efa n)ampangaina matetika momba ny “fangalàna kolontsaina” aho, midika fa ireo taranaka Hindoa/Aziatika irery ihany no mahazo miasa amin'ny tantara Hindoa/Aziatika. Izay no niheverin'ny rehetra, havanana sy havia, fa ilain'ny olona ny hanaovako sarimihetsika momba ny fivavaha”ko”, Jodaisma! Nihevitra aho fa raha mahatezitra azy ireo ny Mihira Blozy i Sita, TENA hahatezitra azy ireo tokoa ny izaho nanonta printy Karatra Jiosy ka ho azoko “lalaovina” ho an'ity tetikasa ity.
NP: Efa nisy andriamanibavy tao amin'ny faritra Flash izay nahetsiko taona roa lasa izay. Nila nanisy “andriamanibavy” maromaro tao amin'ilay horonantsary aho; ary namerina nanao sary an'ireo andriamanibavy tao amin'ny Flash tao amin'ny Moho, ny rindrambaiko fampiasako amin'izao fotoana izao. Hitako fa raha tokony namerina nanao sary azy ireo aho, azoko atao ny mampiasa ny loharanontsary izay ifotoran'izy ireo, nandany andro vitsivitsy aho hahitana izay sary manana ny endrika sy habe tsara indrindra, ary andro vitsivitsy nanalàna tamin'ny tànana ny lafika tery aoriana, tamin'ny fampiasàna ny GIMP . Afaka manao zavatra tsy afaka ataon'i Flash ny Moho, tahaka an'ito karazana fanetsehana miaraka amin'ny sary elektronika. Tsy izany ihany, tsara be izy ireo ka noho izany nampiasaiko tamin'ny rakitsary sisa tao amin'ny Seder-Masoshism izy ireny.
Afaka alaina ao amin'ny Wikimedia Commons ireo andriamanibavy amin'ny netsehana tamin'ny flash.
Satria mamokatra sarimihetsika amin'ny herin'ny tenany i Paley, miasa miaraka amin'ireo hafa mpikatroka ho an'ny kolontsaina malalaka koa izy, tahaky ny QuestionCopyright.org tsy mikatsaka tombontsoa, ao Etazonia, mba hanangona vola ankoatry fanombohana fanentanana Kickstarter. Mamoaka ho an'ny daholobe ny ampahany amin'ilay sarimihetsika eo amin'ny aterineto izy arakaraky ny fandrosoan'ny famokarana ny sarimihetsika.